Shirweyne caalami ah oo loogaga hadlayo tacadiyada iyo dilalka aadanaha oo Sweden ka furmay
Maanta ayaa si rasmi ah waxaa magaalada Stockholm ee xarunta dalkan Sweden ka furmay shirweyne caalami ah oo loogaga hadlayo xasuuqa iyo dilalka loo geysto dadka rayidka ah. Shirkan oo muddo sadex maalmood ah si habsami ah uga socon doona magaalada Stockholm ayaa xafladii furitaankii waxaa halkaasi ka hadlay Ra'iisal wasaaraha dalkan Sweden Göran Persson oo sheegay iney tahay arrin muhiim ah siddii ay adduunyada meel cad iskaga taagi laheyd dhibaatooyinka loo geysto dadka rayidka ah.
Koofi Canaan oo isagana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in adduunweynuhu arintaasi dhaqaalo diyaar u yahay hase ahaatee aysan jirin ciddii fulin laheyd ka hortaga xasuuqa loogeysto dadka rayidka ah.
Waxaa uu si gaar ah u xusay xasuuqii ba'naa ee ka dhacay dalalka Ruwaanda iyo Bosniya horaantii sagaashameeyadii ay ahaayeen kuwii ugu xanuunka badnaa ee qarnigii tagay lugu xasuusto, waxaana isagoo arintaasi ka hadlaya uu yiri "Waa ayaan darro tii ugu weyneyd iney dalal xubno ka ah Qaramada Midoobey ay geystaan falal ka dhan ah aadanaha, hase ahaatee go'aankii Golaha ee ka hortaga arintaasi aysan noqon mid lugu guuleysto". Dhinaca kalena waxaa uu Koofi Canaan weeraray dowladaha leh awooda sida aysan dhinacooda mas'uuliyad iskaga saarin in dadka rayidka ah la xasuuqo.
Madaxda ilaa iyo hada shirkan ka soo qeybgashay ayey badidooda ka yimaadeen dalalka Yurubta bari iyo dunida sadexaad taasoo durba dadka ka faalooda arimaha diblomaasiyada ay ku tilmaameen shir aan miro dhaleyn marba haddii dalalka awooda leh ee reer Galbeedka aysan shirkan ka soo qeybgelin. Kulankan maanta sida habsamida leh furmay magaalda Stockholm ee dalkan Sweden xubinihii halkaasi ka hadlay waxaa ugu muhiimsanaa Koofi Canaan oo ah xoghayaha guud ee Qarama Midoobay, Hans Blix iyo xoghayaha arimaha dibada ninka u qaabilsan Midowga Yurub Javier Saluna, oo dhamaantood isku raacay in aduunyadu meel uga soo wada jeesato xasuuqa naxariis darrada ah ee dadyowga dunida lugula dhaqmo loona geysto.
Shirkan oo ah midka ugu dambeeya ee loogu magac daray "Stockholm's Internationella Forum" markiisi horena looga hadli jiray arimaha la xirriira deegaanka iyo dhaqamada dunida ayaa qeybtiisii ugu dambeysay looga hadlayaa arrimaha la xirriira bani'aadamnimada iyo tacdiyada aadanaha loo geysto.
Dhinaca kale mid kamid mas'uulinta uga qeybgalaya Israa'iil kulankan ayaa durba si dadban u bilaabay iney weeraraan Muslimiinta gaar ahaan iyagoo ku eedeynaya warfaafinta reer galbeedka sida ay ula safteen waxa ay ku sheegeen "Barabagaandada carabta". Mas'uulkan oo aan la magacabin ayaa sheegay in maanta dayax gacmeedka laga daawado tv-yada ee ay Qaarada Yurub suuragelisay in wararka ku tiri ku teenka ah ee ay carabtu soo deyso laga daawado. Gaar ahaan waxa uu aad u weeraray telefeyshinka Al- Manaar oo uu ku sheegay mid ay maalgeliso ururka Xisbulah ee dagaalka ba'an kula jira dowladiisa. "hadalku waa mid macno buuxda yeelan kara, mar waa wada hadal marna waa dagaal toos ah, hase ahaatee sow ma ahan wax layaab leh in shirweynahan caalamiga ah ay ahmiyad siiso kuwa isku soo xira bambada ee aan ku ekaan Yahuuda oo keliya ee ugaarsada, Mareykanka, Ruushka, Turkiga iyo Australia, taasoo ah mid ku dhiiragelisay in arimaha noocaas ah laga taageero dunida Muslinka" ayuu yiri mas'uulkan shirkaasi ka qeybgalayey isagoo dhinacna ka muujinaya sida adduunka maanta guud ahaan naceyb daran looga hayo siyaasada Israa'iil.
Qaban qaabiyeyaasha shirkan oo qaarkood ka tirsan yihiin xukuumada Sweden ayaa sheegay in shirkan muhiimadii loogu talagalay aysan aheyn in looga hadlo xaalada murugsan ee bariga dhaxe, sidaas daraadeed ay xukuumada Sweden ku da daaleyso in shirkan uusan noqon mid ay isku cambaareeyaan ka qeybgalayaasha.
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 27, 2004
Sweden oo ka furmaya shirweyne caalami ah
oo loogaga hadlayo tacadiyada iyo dilalka loo geysto dadka rayidka ah warbixintii Ikraam 25/1